Archive du 20190611
Voahangy Rajaonarimampianina Tsy sahin’ny fanjakana henjehina
Maro ireo olon’ny HVM nambara fa nanao afera maloto sy kolikoly. Ao ny nogadraina fa misy ireo milamina sy afa-bela.
Firosoana amin’ny fampihavanana tena izy Tsy mbola voalamin’ny CFM…
Mipetraka amin’ny maha raiamandreny ny CFM, hoy ny filohany Maka Alphonse, raha nanontaniana mikasika ny fanantenana ny amin’ny ahatongavan’ny fampihavanana tena izy manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Gérard Noel Ramamimampionona “Tanjona ny hisian’ny firindrana eo amin’ny fahefana”
“Tokony ho fantratry ny Malagasy fa rehefa fifidianana dia fananganana zavatra. Ny vahoaka no manome sy mampindrana ampaham-pahefana aman’olona”, hoy i Gérard Noel Ramamimampionona, filoha lefitry ny Komitin’ny Fampihavanana Malagasy (CFM).
Hala-bato tany Betroka Tsy hanaiky ireo komity mpanohana ny kandida IRD
Hitory eny anivon`ny Fitsarana momba ny lalàmpanorenana momba ny hala-bato nitranga tany amin’ny distrikan`i Betroka ny komity mpanohana ny kandidà IRD any an-toerana.
HCC Ambohidahy Tsy manaiky tsindry avy any ivelany
Hatramin`ny fanambarana ny vokatra ofisialy ny fifidianana solombavambahoaka, nanamafy ny filohan' ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC), Jean Eric Rakotoarisoa fa tsy mandray kandidà, na solontenan`ireo mpilatsaka hofidiana.
KMF-Cnoe Ilaina ny fanamafisana ny fitandroana ny filaminana
Taorian`ny fandoroana fokontany iray manontolo tany Ambohimiera sy Ifanadiana, ny asan-dahalo izay namoizana ain`olona tany Ambohimahasoa Isandra, tapa-bolana lasa izay, dia namoaka fanambarana ny fiarahamonim-pirenena KMF-CNOE
Fetin’ny pentekosta Ny akoho efa maty no be mpividy, tsy nisy mpanontany ny vorona
Nangina ny fetin’ny Pentekosta izay nankalazaina ny alahady lasa teo raha oharina tamin’ny fetin’ny paska. Raha araka ny fanazavan’ireo mpivarotra mantsy dia tena maina ny tsena, indrindra fa ho an’ireo mpivarotra akoho amam-borona velona.
Tsara tohana ny Barea Miandrandra vokatra tsara ny Malagasy
Tsy mbola nisy ekipam-pirenena teto Madagasikara na ny Club M na ny Scorpions nahazo fanampiana sy fanohanana ary serasera efa tena iraisam-pirenena tahaka ny Barea amin’izao fotoana.
Barean’i Madagasikara Nahazo 700 tapitrisa ariary
Feno dia feno ny fandaharam-potoanan’ny Barean’i Madagasikara mandalo eto Madagasikara ankehitriny.
Rugby MijoroA 2019 Feno hipoka i Mahamasina
Fahombiazana tanteraka no azo ilazana ny hetsika lalao rugby nokarakarain’ny Association MijoroA tamin’ny alahady 09 jona 2019 lasa teo.
Tenisy - Rafael Nadal In-12 nandrombaka ny amboara tao Roland Garros
Fanindroambiafolony izao no nandrombahan’ilay mpilalao tenisy Espaniola Rafael Nadal ny fifaninanana Roland Garros ao Paris.Tena mafy i Rafa, izay no ambentin-tenin’ny rehetra nanaraka ny lalao ny alahady lasa teo.
Mila manova tanteraka
Fitenina Malagasy maro matetika moa ny hoe mila manova toe-tsaina isika.
Fara Gloom Namoaka ny rakikira « Gasikara »
Misy kalo, Aiza izy izay, …anisan’ny hira nahafantarana an’i Fara Gloom. Nampahafantariny tetsy amin’ny Hotely Telozoro Andrefan’Ambohijanahary ny fivoahan’ny rakikira “Gasikara”.
Mikorontana ny ao Haiti Olona roa no namoy ny ainy
An`arivony ny mponina tao Port-au-Prince Haiti no nidina an-dalambe ny alahady lasa teo nitaky ny fanesorana ny filohan`ny Repoblika, Jovenel Moise.
Soudan Tsy milamina intsony
Niatrika fivoriana vonjimaika ny filankevitry ny Vondrona Afrikanina teo anivon`ny fandriampahalemana taorian`ny fifandonana nahafatesana olona maro tao Khartoum ny zoma lasa teo.
“Rocade” Marais Masay-By Pass Matahotra hiala maina ireo ho rava trano
Fianakaviana marobe no tsy maintsy miala amin’ny toeram-ponenany noho ny fanatanterahana ilay lala-manitsy na ny “Nouvelle Rocade” miainga eny amin’ny Marais Masay mipaka any amin’ny By Pass.
BAR tsy nanara-dalàna Olona 22 no nosamborina teny 67Ha
Volan`ny mpanjifa OTIV Boeny Andrasana hivoaka amin`ity herinandro ity
Tokony hivoaka amin`ity herinandro ity farafahatarany ny tetiandro fandoavam-bolan`ny mpanjifa OTIV raha toa ka ny zoma lasa teo no fe-potoana handrafetana izany.
Telolahy hita faty tao Ampitatafika Miaramila 27 nadoboka eny Tsiafahy
Naiditra am-ponja avokoa ireo miaramila 27 fa tsy araka ny feo nandeha raha ny fanamafisana avy amin’ny mpitandro filaminana. “27 fa tsy folo izany no naiditra eny Tsiafahy.
Lozam-pifamoivoizana By-Pass Mbola karohina ilay mpamily taksibe nahafaty olona 3
Raha ny fampitam-baovao azo avy amin’ny mpitandro filaminana izay nanatanteraka ny fijerena ifotony ny lozam-piarakodia ny faran’ny herinandro teo, tsy mbola hita izay nanjavonan’ilay mpitondra fiara fitanterana hatramin’izao.